विश्वविजेता फ्रान्सको शानदार जित, एन्डोरा पराजित , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विश्वविजेता फ्रान्सको शानदार जित, एन्डोरा पराजित
एजेन्सी । युरो कप छनोटमा फ्रान्सले एन्डोरामाथि ४–० को जित निकालेको छ । मंगलबार राति समुह एचको खेलमा विश्वकप विजेता टिमले सहज जित निकालेको हो ।
पछिल्लो खेलमा टर्कीसंग पराजित भएपछि मुख्य प्रशिक्षक डिडियर डेसच्याम्पले सात खेलाडी टिममा परिवर्तन गरेका थिए । लयमा देखिएको फ्रान्सका लागि केलियन एम्बाप्पेले ११ औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । योसंगै उनले करियरको सयौ गोल पुरा गरेका थिए ।
वेन इडरले ३० औ मिनेटमा फ्रान्सको अग्रता दोब्बर पारे । पहिलो हाफको ईन्जुरी समयमा थाउभिनले फ्रान्सलाई ३–० को अग्रता दिलाए । ६० औ मिनेटमा जुमाले फ्रान्सका लागि चौथो गोल गरे । फ्रान्स ४ खेलबाट ९ अंक सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छ भने एन्डोरा अंक विहिन हुँदै तालिकाको पुछारमा रहेको छ।
गए रातिनै भएको खेलमा अल्बानियाले माल्डोभालाई २–० ले पराजित गर्यो। त्यस्तै आईसल्याण्डले टर्कीलाई २–१ ले पाखा लगायो । अल्बानिया ६ अंक सहित चौथो, माल्डोभा ३ अंक सहित पाँचौ, आईसल्याण्ड ९ अंक सहित तेस्रो र टर्की समेत ९ अंक सहित समुह एचको दोस्रो स्थानमा रहे ।